Nọgide na isiokwu na blog gị? Jiri igwe ojii mkpado gị iji hụ | Martech Zone
Nọgide na isiokwu na blog gị? Jiri mkpado igwe ojii gi iji hu
Satọde, Satọdee 2, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe m gara na saịtị ndị ọzọ, anaghị m ahụkarị igwe ojii mkpado ha. Amaghị m ihe kpatara ya, echere m na m na-anọkarị ebe ahụ n'ihi na achọtara m onwe m ebe ahụ site na ntụaka ma ọ bụ isiokwu ma ọ bụ nkọwa nwere mmasị na m.
Agbanyeghị, echere m na ọ dị mkpa maka ndị na-ede blọgụ ị paya ntị na igwe ojii nke onwe ha. Pụrụ ịhụ mkpado igwe ojii m na sidebar n'okpuru “Mkpado”. Echere m na m na-arụ ezigbo ọrụ nke idebe ọdịnaya, ebe igwe ojii na-ezo aka azụmahịa, marketing, na technology. Nke ahụ bụ n'ezie ihe m chọrọ ịdebe ọdịnaya nke blọgụ m ka m wee chee na m na-arụ ezigbo ọrụ.
Igwe ojii mkpado (nke a na-akpọkarị dị ka ndepụta dị arọ n'ọhịa nke imepụta ihe) bụ ngosipụta ngosipụta nke mkpado ọdịnaya ejiri na weebụsaịtị. Ọtụtụ mgbe, a na-egosipụta mkpado ndị a na-ejikarị eme ihe na nnukwu font ma ọ bụ mesie ike n'ụzọ ọzọ, ebe usoro gosipụtara bụ mkpụrụedemede. N'ihi ya ma ịchọta mkpado site na mkpụrụ okwu na ewu ewu ga-ekwe omume. Họrọ otu mkpado n'ime igwe ojii mkpado ga-eduga na nchịkọta ihe ndị metụtara mkpado ahụ. - Wikipedia
Lezienụ anya na mkpado igwe ojii gị, ọ ga-enye gị ozi iji hụ ma ị nọ na ọdịnaya. Lelee ụfọdụ igwe ojii mkpado ndị a ma hụ ma saịtị ndị a ọ dị na ọdịnaya:
Onye na-eme okpokoro
E wezụga nke m, ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke blọọgụ nwere ọganiihu. Mgbe ị jiri igwe ojii mkpado tụnyere nkọwapụta nke blọọgụ, ị ga-ahụ ọhụụ zuru oke n’etiti ha. Echere m na ọ bụrụ na igwe ojii mkpado gị enyeghị onye ọbịa nleta nke ihe blọọgụ gị bụ n'ezie, mgbe ahụ ị ga-emerịrị uche gị, ma ọ bụ mezie otu ị si akọwa ma kọwaa blog gị.
Sep 2, 2006 na 10:41 PM
Ọmarịcha ọkwa - na - ele igwe ojii mkpado m, ihe niile nọ ebe niile 😆
Have nwere nnukwu saịtị ebe a Douglas, debe ya!
Nov 14, 2006 na 1:32 AM
M n'ụzọ ụfọdụ rutere na saịtị gị site na ịpị thrus na-ahapụ ka ịsị na isiokwu a nyere aka. Dị ka onye na - ede blọgụ ọhụrụ, ọ na - esiri ike ijide echiche SEO niile. Daalụ maka itinye ya n'ime usoro digestable. Ugbu a ọ bụrụ na m nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na ịhapụ okwu m na URL m bụ otu ihe dị ka trackback?
Jenụwarị 26, 2007 na 1:22 PM
M tinye a igwe ojii mkpado a na saịtị.
Mee 28, 2007 na 10: 03 PM
Ezigbo ozi. Ma Tag Cloud ọ ga-arụ ọrụ maka ebe nrụọrụ arcade.